ဆရာဇော့်ကို ဘာကြောင့် မအလဂျပုကြောက်လဲ? – Shwe Thadin
ဆရာဇော့်ကို ဘာကြောင့် မအလဂျပုကြောက်လဲ?
09/06/2021 admin Revolution 2021 0
ယခင်တော်လှန်ရေးတွေမှာ လူငယ်ကျောင်းသားတွေက နိုင်ငံရေးသမားအနေနဲ့ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ခင်ညွန့်စစ်ထောက်လှမ်းရေးက စပိုင်လွှတ်တယ်။ လူငယ်တွေဆိုတော့ စပိုင်ကြောင့်သူတို့လူမိတော့ စပိုင်ရှာရင်းနဲ့ ပြဿနာပေါ်တယ်။ လူငယ်တွေဆိုတော့ ကြိုမမြင် ကြိုမပြင်တာတွေရှိခဲ့ကြတယ်။ ယခုတော်လှန်ရေးမှာက ဆရာဇော်ဝေစိုးတို့ Dr SaSa တို့လို ပညာတတ်တွေက ဦးဆောင်လို့ မအလဖက်ဆစ်တပ်က အကြောက်ဆုံးပါ။ ပထမ ပညာအရာမှာဆိုရင် မအလနဲ့ စိုးဝင်း ၁၀ တန်းအမှတ်ပေါင်းတောင်ဆရာဇော်ဝေစိုးအမှတ် မမှီပါ။ နောက် မအလရဲ့ စကစလူအားလုံးရဲ့ ဘွဲ့ပေါင်းရင်လဲ ဆရာဇော်ဝေစိုးကို မမှီပါ။ မိုးနဲ့မြေကွာပါတယ်။ အတွေးအခေါ်ကလဲ မိုးနဲ့မြေ စိတ်ထားကလဲ မိုးနဲ့မြေပါ။ ဆရာဇော့်ပညာအရည်အချင်းက နတ်ပြည်လောက်ဖြစ်ပြီး မအလက အဝီစိထက်တောင် နိမ့်ပါမယ်။
မအလဟာ ဆရာဇော်ရဲ့ ကျန်းမာရေးသင်ကြားမှုအောင်မြင်တာ ပညာရေးအတွက် လူတွေကိုထွက်ပေါက်ပေးသင်ကြားမှုပြင်ဆင်ထားတာတွေကြောင့် ခံနေရပါတယ်။ အဓိကက မအလအစည်းအဝေးမှာ ဆရာဇော်နဲ့ Dr Sasa ကြောင့် သူတို့ဒုက္ခရောက်ရကြောင်း စရဖကတင်ပြရင် မအလတင်းပါတယ်။ ဆရာဇော်ဟာ ဘွဲ့ရ ပညာတတ် ပါချုပ် ငွေကြေးကြွယ်ဝသူ ကိုဗစ်ကိုင်တွယ်ရာမှာ ပြည်သူလေးစားသူဖြစ်ပြီး မအလက ပညာမတတ် သူခိုး ဓားမြ အမေစုကို အာခံသူ ပြည်သူက မုန်းသူပါ။ဆရာဇော်ဝေစိုးဟာ အပြောအဆိုအရေးအသားကောင်းပြီး ပြည်သူကို စည်းရုံးနိုင်သူပါ။ သူ့ကို မအလရဲ့ စရဖက တိုက်ရတာ အင်မတန်ခက်ပါတယ်။ ယခင်နိုင်ငံရေးသမားဆိုရင်တောင် တိုက်လို့လွယ်ပါတယ်။ ဆရာ့ဇော်ကို ပညာရေး၊ ငွေကြေး၊ ဘာသာရေး၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် မည်သည့်အရာနဲ့မှ တိုက်မရလို့ အောက်လမ်းနည်းသုံးလာတာပါ။ သူတို့ ဆရာ့ဇော်အိမ်ကို မီးရှို့တာက မအလက သူ့တပည့် စရဖကို ကျောင်းမီးရှို့တဲ့ ကိစ္စလို အမိန့်ပေးပြီးလုပ်တာပါ။ ဒါက သူတို့ဘယ်လောက် ယုတ်မာလဲအသည်းအသန်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကို ပြနေပါတယ်။ မအလက အာဆီယံက ကျောင်းမီးရှို့တာကို မပြောလို့ သူ့အစည်းအဝေးမှာ ထည့်ပြောရတာက သူ့စရဖက ငွေကြေးများစွာရင်းပြီး ကျောင်းတွေကို လိုက်မီးရှို့ထားတာကို အာဆီယံက အဖက်မလုပ်လို့ တင်းတာကို ပြတာပါ။ ဂွင်မမိလို့ပါ။
ပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲ NUG ပြောတာကို နားစွင့်ပြီး D Day အတွက် ပြင်ဆင်ပါ။ ပိုက်ဆံငွေသားထုတ်ထားပါ။ မိမိအိမ်မှာ ရိက္ခာဖြည့်ထားပါ။ စစ်ပညာသင်ပါ။ ရှေးဦးသူနာပြုနည်းသင်ပါ။ မိမိလမ်းရပ်ကွက်က စရဖ သတင်းပေးနဲ့ ဖွတ် နာမည်ကို စုဆောင်းပါ။ မိမိနားက တပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ သတင်းအချက်အလက်ကို စုဆောင်းပါ။ ဥပမာ အဆိုပါတပ်ရင်းက ရှေ့တန်းထွက်လား လူဘယ်လောက်နောက်တန်းမှာ ကျန်ခဲ့လဲ စသဖြင့်ပေါ့။ နိုင်ငံခြားကလူများ တော်လှန်ရေးအတွက် ငွေများများ လှူပါ။
ကျန်လူက တိုက်ပွဲခေါ်ရင်သာ အဆင်သင့်စောင့်နေပါလို့ ပြောပါရစေ။
Credit: Myat Tun Oo
ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ဒလံတွေ အသိတရား ဝင်နိုင်ပါစေ